नागढुङ्गादेखि मुग्लिनसम्मको ९४ किलोमिटर सडक छ लेनको बन्दै ! « Etajakhabar
नागढुङ्गादेखि मुग्लिनसम्मको ९४ किलोमिटर सडक छ लेनको बन्दै !
काठमाडौँ ।यस वर्षको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा
काठमाडौं । यो वर्ष पनि यस वर्षको एसईई र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा स्थगित
काठमाडौ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि पनि ओलीका तर्फवाट केही